100W Led Landscape Area Lights 5000K agba ọla China Manufacturer
Nkọwa:Ejiri Mpaghara Gburugburu,Gburugburu Gburugburu Mpaghara maka Ahịa,5000K Led Light Lights
Home > Ngwaahịa > Ebube Ogologo > Uhie Post elu > 100W Led Landscape Area Lights 5000K agba ọla
Ihe Nlereanya.: BB-LD-100W-AR-B
Ekele 100w na Mpaghara edepụtara ya maka awa 50,000, jiri nwayọọ na nchara lampshade nye ebe dị mma maka ikpo ọkụ. Nke a Egwurugwu Gburugburu Ebe E Si Nweta Akwụsịrị na-adaba na nkedo 2 3 / 8in, ihe nkedo gụnyere. Enwere ike iji anya ọkụ na- ekpuchi 5000K Led maka ọkụ ọkụ, ụlọ ọrụ, ogige, ebe egwuregwu na ebe ndị na-adọba ụgbọala. Nke a 2700k na-ada ìhè ebe ọdịda anyanwụ nwere IP65 rating ụlọ, Aluminom die-mgbatị ụlọ n'ihi na ọmarịcha na-adịgide adịgide na ike. Nye onwe gị udo nke uche ebe ọ maara na anyị mere odida obodo iju mmiri Ejiri afọ 5 anyị kpuchie ya. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ga-eme, anyị nwere ike kpuchie gị.
Ebube Ebube Ebube Egwu Mpekere 75 Watts 9750lm Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo n'èzí n'èzí n'Ọdọ Ụzọ Ámá Ụzọ Na-adịghị Anya Kpọtụrụ ugbu a
duziri ihe nkedo dị elu 100W Kpọtụrụ ugbu a
5000K IP65 100W Mgbasa Ozi Ochie Gburugburu Ebe Kpọtụrụ ugbu a
Ogige Ubi Azu Uzo Post Top 100W Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro n'èzí na-ebute Oghere n'elu ìhè Kpọtụrụ ugbu a
Photocell IP65 75W mere ka ìhè dị n'elu Kpọtụrụ ugbu a
DLC 9750mm 75Ndị na-ebute oriọna post Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri Mpaghara Gburugburu Gburugburu Gburugburu Mpaghara maka Ahịa 5000K Led Light Lights Oghere Mpaghara Gburugburu Ogwe Mpaghara Gburugburu 50W Ebe Mpaghara Gburugburu Gburugburu Mpaghara Gburugburu 20N Ndabere Mpaghara Gburugburu